Zimbabwe Yovandudza ZIMSTAT Kuti Ivake Hukama neIMF
Zimbabwe yawana mari inosvika madhora mamiriyoni makumi mashanu ekuAmerica, US$50m, yekuvandudza sangano reZimbabwe National Statistics Agency, kana kuti ZIMSTAT, muchikamu chekutanga kuyedza kudyidzana neInternational Monetary Fund, kuitira kuti ikanganwirwe chikwereti.
Vamwe vakuru kuZIMSTAT, iyo yaimbonzi Central Statistical Office, vanoti vaimbova gurukota rezvekurongwa kwehupfumi, VaElton Mangoma, avo vave gurukota rezvemhando dzemoto, ndivo vakatsvaga mari kuAfrica Development Bank.
Gurukota idzva rekurongwa kwehupfumi, VaTapiwa Mashakada, varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure negurukota rezvemari, VaTendai Biti. Bhodhi reInternational Monetary Fund, IMF, rinoti Zimbabwe inofanira kutevedzera chirongwa chinokurudzirwa nesangano iri, kuitira kuti ikanganwirwe chikwereti che US$7, 6 billion icho chiri kutyirwa kuti chinosvika pa US$8,6 billion.
Mudare remakurukota hamuna kuwirirana pakati peZanu-PF neMDC nezvechirongwa cheIMF ichi. Zanu-PF inoti zviri kudiwa ne IMF hazvina musoro.
Asi MDC inoti izvi ndizvo chete zvingabatsira nyika kubva mukanwa mamupere. VaMangoma vanoti vanofunga kuti gwara iri richapa kuti chikwereti chiwane kanganwiro.